Mayelana NATHI - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
INanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Sinomugqa ophelele wokukhiqiza kanye nendawo yokuhlangabezana namandla wokukhiqiza kanye nethimba lethu lophenyo lobungcweti lokulawulwa okuqinile kwekhwalithi.Isevisi ye-OEM ne-ODM iyatholakala futhi iqembu lethu lokuklama lingakusiza wenze ngezifiso ilebula lakho langasese. Ithimba lethu lokuthengisa lizoba amahora angama-24 liphendula imibuzo yakho futhi lixazulula izinkinga zakho. Ngokulethwa, sinesivumelwano ne-DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT ngemali engcono yokuthumela kanye nesiqinisekiso sokuhamba.
Ikhwalithi ingumgogodla, insizakalo iyinjini. Sigxila ekunikezeni amaklayenti ethu imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezingcono kakhulu.Yonke imikhiqizo e-ode kithi ithokozela ukubuya noma ukubuyiselwa imali zingakapheli izinsuku eziyi-7 zokusebenza uma kunezinkinga zekhwalithi nokonakala kwezinto zokuhamba.Ngasikhathi sinye, ithimba lethu ngemuva kokuthengisa ngokuqinisekile lizoqiniseka xazulula inkinga yakho kungakapheli amahora angama-24.
Kuze kube manje, sikhonze amakhasimende avela emazweni angama-50 emhlabeni wonke, futhi ama-80% awo anikeze izinga eliphezulu lokuqashelwa nokwazisa ngomkhiqizo wethu nensizakalo yethu, futhi athi azohlala egcina ubudlelwane obuzinzile bokusebenzisana nathi. Phakathi kwabo, amakhasimende ethu afaka abathengi bezinkampani, abasabalalisi, izitolo ezingaxhunyiwe ku-inthanethi nezitolo eziku-inthanethi, njll.
Sizibophezele ekukhonzeni amakhasimende ethu nasekuhlinzekeni ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, siyethemba ukwenza inqubekela phambili nokuthuthuka kanye namakhasimende ethu Sizimisele futhi ukugcina ubudlelwane besikhathi eside futhi obuzinzile bokusebenzisana namakhasimende ethu. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwekhwalithi yethu yomkhiqizo nensizakalo, singenza amakhasimende ethu azizwe elula futhi aqiniseke kakhulu ukuthi abambisane nathi, ngaleyo ndlela afinyelele isimo sokuwina. Ngezinkinga zamakhasimende, sizohlinzeka ngokubonisana nezixazululo ngokushesha okukhulu, ukuze amakhasimende angabe esakhathazeka.
Izandiso ze-Eyelash, i-eye liner, Abadayisi bezinkophe, Ukuqhuma Kwamehlo, imivimbo ye-mink, ezambiwa,